စျေးပေါသော 808nm Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | VTEX အုပ်စု
၁၁၀၀% သောဂျာမနီသည် Laser Stack တင်သွင်းသည်
၂၊ နီလာစစ်စစ်၊ အကောင်းဆုံးအအေးခံခြင်း
3. 12 * 20mm ကြီးမားသောအစက်အပြောက်အရွယ်အစား၊ “ IN-Motion” ကုသမှုနည်းဖြင့်အမြန်ဆုံးမြန်နှုန်း
4. 808nm သုံးဆလှိုင်းအလျား။ ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်ပါသည်
: Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းပညာသည်အလင်းနှင့်အပူ၏ရွေးချယ်သောဒိုင်းနမစ်အပေါ်အခြေခံသည်။ Laser သည်အရေပြားမျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ ဆံပင်၏ follicles သို့ရောက်သည်။ အလင်းကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးအပူပျက်စီးသောဆံပင် follicles တစ်သျှူးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယခုအခါအမြဲတမ်းဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက်အလုံခြုံဆုံး၊ ထိရောက်သောနည်းပညာ
Diode Laser ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်၏အားသာချက်
၁၀ * ၂၀ မီလီမီတာအစက်အပြောက်အရွယ်အစားနှင့် ၁၀ HZ ထပ်ခါတလဲလဲမှုနှုန်းနှင့် IN-Motion အသိဥာဏ်ပညာသည်အမြန်ဆုံးကုသမှုမြန်နှုန်းကိုတစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀ နှုန်းထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးသောကြောင့်ကုသမှုအတွက်အချိန်များစွာသက်သာသွားလိမ့်မည်။
က။ 2000W အားကောင်းသော power supply သည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်သည်
ခ။ ဂျာမနီသည် Laser Stacks ၁၀ လွှာနှင့် 800W output ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ (ပုံတိုင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေတိုင်များအတွက် TEC အအေးပေးစနစ်နှင့် TEC ကိုလက်ဖြင့်အပိုင်းပိုင်း၌နီလာအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စက်ဖြင့် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး Sapphire လက်အောက်ခံ 0-5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူအအေးပေးသည့်စနစ်ကကုသမှုကိုအမြဲအဆင်ပြေစေသည်။
အသုံးပြုသူများအတွက်အလိုအလျောက်အသိဥာဏ်ရှိသည့်ပုံစံဒီဇိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၊ လိင်နှင့်အသားအရေအမျိုးအစားအလိုက်ကွဲပြားခြားနားသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်ပင်စက်ကိုအလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည်။
10.4 "24 အရောင်ထိ LCD မျက်နှာပြင်
Pulse width ကို
ချိန်ညှိ 1-120J / cm2
အပူလျှပ်စစ်အအေး + ရေအေး + လေအေး + လေဆာခေါင်းအတွက်နီလာအဆက်အသွယ်အအေး
AC 220V / 50Hz သို့မဟုတ် AC 110V / 60Hz
ရှေ့သို့ Factory Outlets ၈၀၈ ဆံပင်ဖယ်ရှားရန်လေဆာရောင်ခြည် - 808nm Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက် - Haidari
နောက်တစ်ခု: Picosecond လေဆာတက်တူးထိုးဖယ်ရှားရေးစက်
808 Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်း
808 Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်
Ipl Optaser လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေးစက်အမြဲတမ်း Ha ...